Saịprọs na-eme nnwale COVID-19 kwa izu maka ndị njem nlegharị anya ọ bụla
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Saịprọs na-eme nnwale COVID-19 kwa izu maka ndị njem nlegharị anya ọ bụla
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Saịprọs • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọbịa nwere asambodo ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 ma ọ bụ asambodo na-akwado mgbake gara nke ọma site na ọrịa COVID-19 gara aga ka a napụrụ na ule PCR.
Ndị ọchịchị Saịprọs na-ekwupụta ụkpụrụ COVID-19 ọhụrụ maka ndị ọbịa.
Nnwale COVID-19 kwa izu chọrọ ugbu a maka ndị ọbịa niile anaghị agba ọgwụ mgbochi
SafePass chọrọ ugbu a maka ebe ọha niile.
Ndị ọrụ gọọmentị Saịprọs kwupụtara usoro mgbochi COVID-19 ọhụrụ maka ndị njem taa.
Malite na Ọgọstụ 1, ndị niile na -eme ezumike emeghị ọgwụ mgbochi ọrịa Cyprus ga -enyocha PCR kwa izu. A ga -achọ nnwale nke mbụ malite na ụbọchị nke asaa mgbe ndị ọbịa na -ejighị ọgwụ mgbochi rutere n'àgwàetiti ahụ.
SafePass nke na-akwado ọnụnọ COVID-19 ga-adị mkpa ka ewepụta ya mgbe ị na-eleta ụlọ ahịa nwere ihe karịrị ndị ọbịa iri, yana n'ụlọ ọrụ ahụike ebe ọ bụla n'àgwàetiti ahụ.
Dị ka ndị ọchịchị siri kwuo, ka ọ dị ugbu a, iwu ọhụrụ a ga -amalite ruo Ọgọst 31.